Hisense AP-12CR4SFJS Portable Type Air-Conditioner (1.5HP) | Buy online | SHOP.COM.MM
Hisense AP-12CR4SFJS Portable Type Air-Conditioner (1.5HP)
Ks 400,000 -5%
It isn't ready to use.No choice for online goods.It must be transport problem or low guality device. Read more Hide
တကယ် အသုံးဝင်တယ် Read more Hide
hi sense portable air con is very good to have one at home.it can move everywhere and no need to worry installation and also has warranty. Read more Hide
အေးလဲအေးတယ် Read more Hide
ဒီ Hisense အမှတ်တံဆိပ်လေအေးပေးစက်လေးက အခုလိုပူလောင်တဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ Read more Hide
Hisense air-conရဲ့အရည်အသွေးအရမ်းမိုက်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာအအေးမြန်စေလို့တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
ဘီးလုံးလေးတွေပါတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာထားထား အဆင်ပြေပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေတစ်ကောင်ခွဲအားရှိတဲ့ လေအေးပေးစက်ဖြစ်လို့ အခန်းကျယ်အတွင်းမှာတောင် လေကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ Read more Hide
Specifications of AP-12CR4SFJS Portable Type Air-Conditioner (1.5HP)